Blog-Kubvarura: SR Coley | Martech Zone
Ichi chakakosha! Stephen ishamwari yakanaka ye mwanakomana wangu, Bill. Stefano murume mukuru - akangwara kwazvo, anoda kuziva, uye anoshivirira zvisingaite. Ndinoziva paanondibvunza mubvunzo iye angangodaro anga akamuka husiku hwekurara saka ndinonakidzwa nekumubatsira kunze.
Stefano's blog inofanirwa kunakidza pamusoro pegore rinotevera apo iye achienda kuGerman. Germany inonyatso kuzivikanwa yayo kushaya yeblogiki. Haisi chinhu chinotyisa - zvetsika chete, nyika inowanzo kuve yemagariro kunze kwemidhiya uye yakavanzika mukati mezvenhau. Icho chingangove chidzidzo chakakura kuti maAmerican neAsia vadzidze… isu tinotumira mameseji kana kutumira email vanhu kubva mhiri kwekamuri pane kuvatumira tsamba!
Stefano, ini ndinonyatsoda kukura kwakaita blog yako. Maitiro acho akachena kwazvo. Iwe uri murume akanyarara akanaka asi ndinoziva kuti iwe une rimwe divi, futi. Ndinozviona mune ako makuru geji kuboora uye iwe unoteerera Kutendeuka! Kana iwe ukabvisa pikicha yako, handingambofungidzira iwe uine iwo kuboora. Ini ndinoshamisika kuti waigona sei kushandisa izvozvo neimwe nzira kushongedza yako saiti kuti vanhu vazive kuti iwe une runyararo, rwakagara rwakagadzirirwa divi uye yekugadzira (kuchema?) divi. 🙂
Zvimwe rumwe rudzi rwekushongedza mumusoro wemusoro mufananidzo? Tarisa uone uyu mufananidzo wepashure pownce:
Chinhu chakadai chingashanda here? kumwe kureruka kumashure?
Kungori kuda kwako, asi ini ndaizotora mamaki eDigg. Iwo anokwana zvakanaka, asi iwe une mapeji uye mapeji emazai ehosi (zero). Ini ndinofunga zvinotora kubva kune ako maposi zvakanyanya kupfuura zvainowedzera. Zvichida unogona kugadzira imwe mashiripiti uye kuiviga pa0 uye woiratidza kana iri huru kudarika 1? Kuratidza masiteki uye stats zvinopa vaverengi nepfungwa yekuti iyo blog kana kutumira kwakakosha. Asi kuve neakaderera masiteki kana stats kunogona kunyaradza vanhu kubva pakuverenga kana kunyorera!
Ini ndataura iyi plugin pane imwe chipping: Kuchengeta vanhu padhuze, ini ndinokurudzira iyo Inoenderana Maposi Plugin uye isa zvakabatana zvinoenderana pazasi pechimwe nechimwe chemashoko ako. Nenzira iyi vanhu vanokuwana iwe kuburikidza neKutsvaga Injini vanoverenga zvaunotumira uye kana vasingawani chaizvo zvavanoda, vanogona kunamatira kune zvimwe zvinyorwa zviri pachinhu chimwe chete. Izvi zvichabatsirawo ne kubatanidza kwakadzika Yekutsvaga Injini Chinzvimbo.
Siyanisa zvinyorwa zvako nemifananidzo. Mifananidzo muzvinyorwa inowanzo bata kubata kwevaverengi - kunyanya kana ivo vakanyoreswa kuburikidza neyekudya. Enda kuburikidza nedambudziko rekuwana yakanaka pikicha kana chidimbu che clipart uye nekuzvitumira neiyo blog positi. Ini ndingaite zvakanyanya izvi pane ako Unofanira Kutumira zvinyorwa! A skrini kana logo yeiyo software inobata kutarisisa kwemumwe munhu. Iwe zvakare ungangoda kukanda iyo font-huremu hweblog rako post mazita kuitira kuti vamire kunze zvishoma kunorema. Pandinotarisa peji rako, ndinozviona ndichitarisa pamusoro pemazita (pamwe ndizvo zvandiri!)
Ah - uye ini ndawana kukanganisa kuri nyore kugadzirisa - yako robots.txt faira iri kunongedzera kukamepu isipo. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe une sitemap! Nhau dzakaipa ndedzekuti Google inogona kunge isiri kukambaira saiti yako zvakanaka pasina iyo.
Chinhu chekupedzisira ... chimwe chinhu chinotaridzika chakakanganisika muiyi link mune iyo positi iwe yawakaisa. Dzimwe nguva paunoteedzera kodhi kubva kuHTML zvinoshatisa.
Nakidzwa, Stefano! Ini ndaitofanira kutarisa zvakaoma uye kutsoropodza yako saiti. Uri kuita basa rakanaka!
Tags: mufananidzo wepashurecoleydiggBairirazvinyorwa zvakabatanamarobhotisrcoleystephen coley
Jul 6, 2007 na9: 50 PM
Kutenda tani ton Doug! Ndakagadzirisa chinongedzo mune yangu posvo. Yaive nechimwe chinhu chekuita nemaquotches mamaki.
Chero zvazvingava, ndinotenda zvikuru nekutsoropodza kwako. Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti hakuna kumbove nezvakawanda kwazvo pane yangu blog munguva pfupi yapfuura, asi ikozvino zvandine rese iri basa rekuita, rinofanira kundidzosera panzira. Thanks zvekare. Ndingadai ndisingade kuti blog yangu iratidzwe nemumwe munhu.
Jul 6, 2007 na11: 40 PM
Ndatenda Stephen! Iwe zvechokwadi wakasvetuka kunze kwemasuwo nekumhanya kuzere.